महोत्सवमा व्यवस्थित शौचालय खोई ? - Nayabulanda.com
महोत्सवमा व्यवस्थित शौचालय खोई ?
नयाँ बुलन्द ८ पुष २०७५, आईतवार २२:४६ 340 पटक हेरिएको
इलामको ठूलो टुँडिखेलमा रहेको पुरानो (दुर्गन्धित) शौचालय । तस्वीर : नयाँ बुलन्द
इलाम : प्रदेश १ का चार जिल्ला इलाम, झापा, पाँचथर र ताप्लेजुङका समग्र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ५ पुसबाट इलाममा प्रथम ‘मेची क्षेत्र पर्यटन महोत्सव’ सुरु भएको महोत्सव आज चौथो दिन पनि जारी छ ।
इलाम सदरमुकामको ठूलो टुँडिखेलमा १६ पुस सम्म हुने महोत्सवमा चार जिल्लाका व्यवसायीयले आआफ्नो जिल्लामा उत्पादित सामग्रीको प्रदर्शन गरेका मात्र छैन कि विभिन्न कलाकारहरुको प्रस्तुतीमा दर्शक समेत रमाइरहेका छन् । महोत्सवमा विभिन्न ६६ वटा स्टलहरु राखिएका छन् ।
यी स्टलहरुमा चार जिल्लामा उत्पादित कृषिजन्य, औद्योगिक तथा व्यवसायिक सामग्रीहरु प्रदशर्नीमा राखिएका छन् । महोत्सवमा ५० हजार पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य आयोजकले लिएको छ ।
महोत्सवमा इलामका मात्र नभई देश बिदेशका पर्यटकले अवलोकन गर्ने भनिएको छ । महोत्सवमा काठमाडौ, पोखरादेखि ताप्लेजुङ्सम्मका व्यवसायीहरुले स्टल राखेका छन् । महोत्सवले इलामको मात्र नभई देशको गरिमा राख्ने भन्दै आयोजकले दाबी गरेको छ ।
तर महोत्सवमा आउने पर्यटकका लागि व्यवस्थित शौचालय भने छैन । व्यवस्थित शौचालयको अभावमा पर्यटकलाई समस्या भएको छ ।
महोत्सव लागिरहेको ठूलो टुँडिखेलमा रहेको एउटा पुरानो शौचालय पनि दुर्गन्धित (फोहोर) छ । शौचालय छेउमा जान समेत माक्र्स प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । यत्रो महोत्सवमा एउटा पनि व्यवस्थित शौचालय नहुँदा विशेष गरेर बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र महिलालाई बढी समस्या देखिएको छ । दुर्गन्धित शौचाललय जान समेत लाईन बस्नुपरेकाले झनै समस्या छ ।
यत्रो ठूलो महोत्सवमा व्यवस्थित शौचालय नहुनुले ४ वर्षअघि खुला दिसा मुक्त बनेको इलामलाई कुरीकुरी गरिरहेको छ ।
खुला दिसामुक्त भएको यत्तिका वितिसक्दा समेत जिल्लामा हुने कार्यक्रममा शौचालयको व्यवस्था गरिदैन । यसले खुला दिसामुक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रश्न चिन्ह त उठाएकै छ, समग्र जिल्लालाई नै गिज्याएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण इलाममा जारी मेची क्षेत्र पर्यटन महोत्सव बनेको छ ।